အမေ့ခံအတိတ် | ပရောဂျက်အကြောင်း
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ် တည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အံသြဖွယ်ရာ သမိုင်းကြောင်းကို လူအများ စိတ်ပါဝင်စားမှု ပိုမိုတိုးမြင့်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လက်ရှိသင်ကြားနေသော သမိုင်းတွင် မဆန်းစစ်ဘဲ လက်ခံထားသော အမြင်များ၊ ရှုထောင့်နှစ်ဘက်မှသာ ကန့်သတ်ကြည့်မြင်သော သဘောထားများ ပါရှိနေတတ်ရာ နိုင်ငံ၏သမိုင်းတလျှောက် အဓိကကျသော အတိတ်ကာလများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့် ထိုအတွေးအမြင်များကို စိန်ခေါ်ရန်မှာ ကျွနု်ပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် တရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသ စသော အိမ်နီးနားချင်းဒေသများ၏ သမိုင်းကြောင်းကို မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် ထဲထဲဝင်ဝင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် အတွေးသစ် အမြင်သစ်၊ စိတ်ကူးအသစ်များ လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တိုအနေနှင့် ယုံကြည်မိပါသည်။ မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်းမှသာ ထိုသို့တွေးခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် ဦးသန့်မြင့်ဦး၏ ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှ အစပြုခဲ့သည်။ ဦးသန့်မြင့်ဦးသည် ထိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ပို့စ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် တင်ခဲ့ရာ ပို့စ်အများစုမှာ မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုလိုက်သော ထိုပို့စ်များသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သဖွယ် ဖြစ်လာပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် မြန်မာဘာသာပို့စ်များ ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ဖတ်ရှုလေ့လာရန် ပိုမို အဆင်ပြေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ထိုမျှမကဘဲ ပို့စ်အသစ်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်းကို ဆက်စပ်တွေးခေါ်သုံးသပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို တည့်တံသွားစေရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။
ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဦးသန့်နေအိမ်၏ စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးသန့်နေအိမ်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်နှင့် ယင်းအလွန်တရာ အလေးထားခဲ့သော ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး အစရှိသည်တို့ကို ရည်စူးကာ ဖွင့်လှစ်ထားသော ပြတိုက်နှင့် ဆွေးနွေးမှုစင်တာ ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိလိုပါက uthanthouse.org တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဒိန်းမတ်အစိုးရမှ စေတနာထက်သန်စွာ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ နည်းပညာလောက၌ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ဖန်တီးရာ ကလည်း ကူညီထောက်ပံ့ထားပါသည်။
ဦးသန့်နေအိမ် ဥက္ကဌနှင့် စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်
ကန်းဘရစ်ချ်တက္ကသိုလ် ထရစ်နင်တီကောလိပ် ကျောင်းသားဟောင်း ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးသည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ရ စာရေးဆရာ၊ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ သုံးခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူူးပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံရေး အရေးအရာဌာနတွင် မူဝါဒစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူ၏ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ် “တရုတ်-အိန္ဒိယ ဆုံမှတ်”အပါအဝင် စာအုပ်ပေါင်း ၃ အုပ် ရေးသားပြုစုထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ရုံသာမက အင်းဝအကြံပေးအဖွဲ့၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ကျားလိ သည် ဝဘ်ဆိုဒ် တည်ဆောက်သူ နှင့် ဒီဇိုင်နာ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လူထုအကျိုးပြု နည်းပညာ ကို အလွန် စိတ်ဝင်စား ပြီး သူတတ်ကျွမ်းထားသော အတတ်ပညာ များကို လူမှုအပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို အမြဲရှာဖွေနေသူဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဖန်တီးရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် Open Data Portal တစ်ခုဖြစ်သည့် Open Development Myanmar ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် တည်ဆောက်သူ နှင့် UI Designer အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ ယခင် ကလည်း အခြား လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ်သော မြန်မာ့ ပွင့်လင်း ရှေ့ဆောင် ၊ မဲပေးစို့ အစရှိသည်တို့နှင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာ နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းများ ဖြစ်ရန် ကျင်းပခဲ့သော Hackathon အများအပြား တွင် လည်း ပါဝင် ခဲ့သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အကြံပေးနှင့် ဘာသာပြန်
ဆုနွယ် (Luna) သည် ဦးသန့်နေအိမ်တွင် Program Coordinator အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး www.lostfootsteps.org ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို စီမံနေသူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် စီးပွားရေးပညာ စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (MBA) ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့သည်။ ယခင်က လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဘာသာပြန်ခြင်း၊ စာတည်းခြင်း၊ အခမ်းအနား စီစဉ်ခြင်းနှင့် သုတေသနပြုခြင်းတို့ကို အလွတ်သဘောဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သတင်းထောက်အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စာရေးသူ အဖြစ် လူမှုရေးရာ ဆောင်းပါး ၁၀၀ ကျော်၊ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် စာအုပ် ၂ အုပ် ထုတ်ဝေရေးသားခဲ့သည်။ လူငယ်များ အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို လုပ်အားပေး သင်ကြားပေးပါသည်။
Website Editor and Consultant
Christian Gilberti isahistorian, journalist, writer and PhD student at the University of California, Berkeley. He is an American and hasaB.A. in History from the University of Pennsylvania and an M.St. in History from the University of Oxford. He lived in Myanmar for three years and has written on topics related to Myanmar history and culture foranumber of periodicals including Myanmore Magazine, Southeast Asia Globe, Frontier Myanmar, and the Mekong Review.
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာတည်းနှင့် ဘာသာပြန်
ဇင်မာမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ နေ လူလတ်တန်းစား မိသားစုတစ်စုမှ ဆင်းသက်လာသည်။ သူမ၏ အလှမ်းမဝေးလှသော ရှေးဘိုးဘေးဘီဘင်များသည် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်သော်လည်း သူမကိုယ်သူမ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူသည်။ လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ခန့်အချိန်က သူမ စာရေးခြင်းအလုပ်ကို နှစ်သက်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံကို အကျိုးပြုလိုစိတ် ပြင်းပြကြောင်း သဘောပေါက် နားလည်သွားပြီးသကာလ စာရေးဆရာ၊ ဘာသာပြန်၊ စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ယောက်အဖြစ် စတင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကန်းဆက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၌ စာနယ်ဇင်းနှင့် လူထုဆက်သွယ်ရေးပညာ မဟာဘွဲ့ကို ဆည်းပူးခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကွင်းဆလန်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် စာနယ်ဇင်းပညာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။